ပန်းပန်လျှက်ပဲ ~ Nge Naing
Tuesday, April 05, 2011 Nge Naing 25 comments
ဒီနေ့ မမျှော်လင့်ဘဲ Hit conuter 200, 000 ပြည့်တဲ့နေ့မှာ ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်း မရှိဘဲနဲ့ အမှတ်တရပို့စ်လေးတခုကို တင်ဖို့ ရုတ်တရက် အကြံရလိုက်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ကျွန်မ ဒီပို့စ်ကို တင်တဲ့အချိန်တုန်းက Hit Counter ၁၄၀,၀၀၀ ကျော်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အခု ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့မှာ ၂၁ ရက်အတွင်း Hit Counter 60, 000 ခန့် တရှိန်ထိုး တက်လာပါတယ်။ ဘလော့ဂ် တနှစ်ပြည့်အမှတ်တရ ပို့စ်ရေးတဲ့အချိန် ပြီးခဲ့တဲ့ July 12 ရက်တုန်းက အားလုံးမှ Hit Counter ရှစ်သောင်းပဲ ရှိခဲ့ပြီး အဲဒီနေ့ကနေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ခြောက်သောင်း စုစုပေါင်း တသိန်း လေးသောင်း ရှိရာကနေ ရုတ်တရက်ကြီး ၂၁ ရက် ကာလအတွင်း နောက်ထပ် ခြောက်သောင်း တရှိန်ထိုး တက်လာပြီး Hit Counter နှစ်သိန်း ပြည့်သွားတာဟာ တကယ်ကို မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘလော့ဂ် သက်တမ်း ကာလတလျှောက်လုံးမှာ ဒီသုံးပတ်အတွင်း လူလာလည်မှု အထွတ်အထိပ်ကို အရောက်ဆုံး ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်ဟာ သတင်းဘလော့ဂ်မဟုတ် ၀ါဒဖြန့်ချီရေး ဘလော့ဂ် မဟုတ်ဘဲနဲ့ မိမိဘ၀ဖြတ်သန်းမှုနဲ့ မိသားစုအကြောင်း၊ လေ့လာမှတ်သားဖူးတဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေကို မှတ်တမ်းထားတဲ့ နေရာသာဖြစ်ပေမဲ့ ၂၁ ရက်အတွင်း လူခြောက်သောင်း ၀င်တာဟာ တကယ်ကို ထူးခြားမှုတခုအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီသုံးပတ်အတွင်းမှာ ကျွန်မဟာ အတိုက်အခိုက်ခံရဆုံး အချိန် ဖြစ်နေတာလည်း အမှန်ပါပဲ။ ဒီတော့ ဗေဒင်လက္ခာတွေ သိပ်စိတ်မ၀င်စားတော့လို့ အခုကြီးလာတဲ့အချိန်မှာ သိပ်မကြည့်ဖြစ်ပေမဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကာလက ဗေဒင်လက္ခဏာ မကြာခဏ ကြည့်ဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းက အတိုက်အခံ သိပ်များမယ် အတိုက်အခံ မရှိဘဲနဲ့လည်း ကျွန်မဟာ တိုးတက်မှု သိပ်မရှိနိုင်ဘူး၊ အတိုက်အခံ များမှလည်း တိုးတက်မယ်ဆိုပြီး မကြာခဏ အဟောခံရတုန်းက အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်တဲ့ ကျွန်မအနေနဲ့ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ ယုံလည်း မယုံခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟောတာ အခုတော့ မှန်နေသလိုဖြစ်နေတယ်။ ဒီပို့စ်နဲ့အတူ အခုဒီ ၂၁ ရက်ကာလအတွင်းမှာရော အရင်ကပါ ဘလော့ဂ်ကို လာလည် အားပေးသူအပေါင်းကို အထူးပဲ ကျေးဇူး ဥပကာရတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ။
ကျွန်မတို့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်းကဗျာစုက ပန်းပန်လျှက်ပဲ ကဗျာ၊ ဒါကို သီချင်းပြန်လုပ်ပြီး ဆိုထားတဲ့ မူလအဆိုတော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ကြည်ကြည်ဌေးနဲ့ နောက်ထပ်ပြန်ဆိုသူ နီနီဝင်းရွှေရဲ့ အသံနဲ့ မျိုးသန္တာထွန်းတို့ရဲ့ အကကို ဆက်လက် ဖတ်ရှု၊ နားဆင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မ သိပ်ကို နှစ်ခြိုက်သဘောကျတဲ့ ကဗျာနဲ့ သီချင်းဖြစ်သလို ဆိုသူတွေရဲ့ အသံနဲ့ မြန်မာသံစဉ်အားလုံးကိုလည်း ကျွန်မ သိပ်ပြီးကြိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်မရဲ့ Hit Counter နှစ်သိန်းပြည့် အမှတ်တရပို့စ် ဖြစ်ပါတယ်။
ညိုပြာပြာ၊ လတာပြင် ခြေရင်း။
လှိူင်းတက်ရာ ဗေဒါတက်၊လှိူင်းသက်ရာ ဆင်း။
အုန်းလက်ကြွေ ရေပေါလော၊ မျောစုန်လို့လာ။
အဆင်းနဲ့အလာ၊ ဗေဒါမ အထွေး။
အုန်းလက်ကြွေ သူ့နံဘေး၊ ဆောင့်ခဲ့ရသေး။
နောက်တစ်ချီ ဒီတစ်လုံးက၊ ဖုံးလိုက်ပြန်ပါ။
မြုပ်လေပေါ့ ပေါ်မလာ၊ မဗေဒါအလှ။
တလံကွာ လှိူင်းအကြွ၊ ပေါ်လိုက်ပြန်ရ။
ဗေဒါပျံ အံကိုခဲ၊ ပန်းပန်လျက်ပဲ။
ကဗျာကို ဒီနေရာက ကူးယူပါတယ်။
အဆို = ကြည်ကြည်ဌေး
အဆို=နီနီဝင်းရွှေ၊ အက= မျိုးသန္တာထွန်း(မြို့မစိန်ရတုပွဲ)
နှလုံးစိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်းပြီး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
Posted in: ကဗျာ,ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်,ဗွီဒီယို,မှတ်တမ်း,သီချင်း
ဒီအသက်ဒီအရွယ် နဲ့ Hit တက်တာ ကို ကျေနပ် ပြီး ပိုစ့်တင်တဲ့လူကရှိသေးတယ်နော် ဒုက္ခ ဒုက္ခ
April 5, 2011 at 10:29 PM Reply
Human lifespan & Human psychology အရ အသက် ၁၈-၆၄နှစ် ကို လူကြီးလို့ခေါ်ပြီး လူကြီးအားလုံးမှာ Psycho-social, Cognitive function တွေ အတူတူပဲ။
April 6, 2011 at 2:29 AM Reply
မနေ့က ရောက်ခဲ့သေးတယ်.. ဟိုဟိုဒီဒီ လျောက်ဖတ်နေမိသေး..။
အခုလို အများကြီးတိုးလာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ လူ ( )တွေကို ကျေးဇူးတင်သင့်သား... အဲလိုပဲဖြစ်တက်တယ် သူငယ်ချင်းရေ... ခုတ်ရာတခြား ရှရာတခြား..။
အော် မငယ်ရေ..စာရေးဆရာ တယောက်ပြောသလိုပဲ တီကောင်ကို ပျားအုံဖွဲ့ခိုင်းလို့မရဘူးတဲ့.. ကြက်ချည်တဲ့ကြိုးကို ဆင်ကိုသွားချည်လို့ ဘယ်ရမလဲ..။ ... အင်း တဆက်တည်းပြောချင်သေးတယ်.. သိက္ခာရှိတဲ့သူတယောက်အတွက် အောင်မြင်မူဆိုတာ အလိုလို ဖြစ်တည်ပြီးသား...။ ဘယ်လိုလူတွေကပဲ နှောင့်ယှက်ပစေ... နှောင့်ယှက်သူက အဲဒီအကုသိုလ်ကို အလိုလိုပြန်ရပြီးသား...ဒီလောက်ပါပဲနော်..။
အကြိုက်ချင်းလည်းတူသား.. ပန်းပန်လျှက်ပဲ ...။
April 6, 2011 at 5:28 AM Reply
hit တွေ ၂၀၀၀၀၀ ထိတောင် တက်လာတာ ဂုဏ်ယူပါတယ် မငယ်နိုင်ရေ... ဘလော.ရေးတာကို အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးတစ်ခုလို လုပ်နေသူတွေ၊ နေ.စဉ်လူဘယ်နှယောက်လာသွားလဲဆိုတာ စစ်နေသူတွေနဲ့ ဘယ်သူက ဘယ်နိုင်ငံကလာသွားတယ်ဆိုတာ လိုက်ကြည့်နေတတ်တဲ.လူတွေအတွက် ဒါမျိုးက အလွန်ကြည်နူးဖို.ကောင်းတဲ. ရလဒ်ပါ။
ပိုပြီးပြည်.စုံသွားအောင် တစ်ခြားရလဒ်တွေကိုလည်း ထည်.ရေးသင်.ပါတယ်။
စီဘောက်စ်ကို မကြာခဏ လော.ချလိုက်ရတဲ.အကြောင်းတို.၊
ကွန်းမန်.ကို moderation လုပ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းတို.၊
စီဘောက်စ်ကို လူမြင်ကွင်းမှာ မထုတ်ရဲလို. တစ်ဆင်.ခံလိုက်ရတဲ.အကြောင်းတို.၊
စီဘောက်နဲ. ကွန်းမန်.တွေမှာ အကျိုးသင်.အကြောင်းသင်. ပိုစ်.တွေနဲ.ပတ်သက်ပြီးလာဆွေးနွေးသူတွေ မရှိတော.တဲ.အကြောင်းတို.၊
နာမည်မျိုးစုံကို စိတ်ထဲရှိသလိုရေးပြီး ပြောချင်ရာပြောထားတဲ.လူတွေနဲ.ပဲ စီဘောက်စ်က ပြည်.နေတဲ.အကြောင်းလေးတွေအပြင်
တခြား ဘယ်စီဘောက်စ်မှာမှ မငယ်နိုင်ကို မတွေ.ရတော.တဲ. အကြောင်းလေးတွေပါ ထည်.ရေးရင်တော. အပြည်.စုံဆုံးပါပဲ
ဒါနဲ. ပိုစ်.ဖတ်ပြီး ကွန်းမန့်ပေးတာဆိုလို. လူရင်းတွေထဲမှာ မဗေဒါ သူစိမ်းတွေထဲမှာ ကျွန်နော်တစ်ယောက်ပဲရှိတော့တယ်နော်... ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ ဂုဏ်ပြုသင့်တယ်...ဟဲဟဲ
April 6, 2011 at 6:03 AM Reply
ဟုတ်ပါတယ် တနှစ်လုံးလုံးမှ ရှစ်သောင်းပဲ လာတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ဖြတ်သန်းမှု အကြောင်းရေးတဲ့ ပါစင်နယ်လ် ဘလော့ဂ်ကို နိုင်ငံရေးဘလော့ဂ်လိုလို သိပ်ကိုအရေးပါအရာရောက်တဲ့ ဘလော့ဂ်လိုလို လုပ်ပေးလိုက်တော့ ၂၁ ရက်အတွင်း ခြောက်သောင်းတောင် လာသွားအောင် လုပ်ပေးသူတွေကို ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။ ရေးတာကတော့ ကိုယ့်ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုလေးကို တနေ့တချိန် သားလေး ပြန်ဖတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီး ရည်ရွယ် ရေးထားပေမဲ့ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်က ဒီလောက်အရေးပါအရာရောက်နေမှန်း သူတို့လုပ်လိုက်မှပဲ သိတော့တယ်။ လူတွေလာဖတ်ပြီး အဖြစ်မှန်ကို သိဖို့ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိသန္ဓာရစကားတွေကတော့ အရေးမကြီးဘူး။ ကိုယ်တိုင်လည်း သူများဆီသွားလည်ဖို့ အချိန်မရ တခါတလေ သွားလည်ဖြစ်တော့လည်း အချိန်မရတာနဲ့ တိတ်တိတ်လေး နှုတ်မဆက်ဘဲ ပြန်လာရတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်မှာ ခွေးထက်ယုတ်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေ ၀င်သောင်းကျန်းနေမှတော့ သူတို့လည်း အယုတ္တအနတ္တကျည်ဆံတွေ သူတို့ဆီ မရောက်အောင် ကျည်ကွယ်မျက်ကွယ် ရှောင်ကြတာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါမေပဲ့ အဓိက လူများများ လာဖတ်ဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဖတ်သွားတယ်ဆိုကတည်းက တချို့တွေ အသိစိတ်က လက်မခံရင်တောင်မှ မသိစိတ်ထဲမှာ ပေးတဲ့ Message တွေ ကိန်းအောင်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် လာဖတ်သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
April 6, 2011 at 1:14 PM Reply
အောင်ခြင်း ၈ ပါး ကြောင့်ဖြစ်မယ်နော်...ပို့စ် အသစ်တင်တိုင်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်....အားပေးလျက်
April 6, 2011 at 9:27 PM Reply
hit တွေတက်တယ်ဆိုတာ အရင်ကထက်စာရင် နည်းပါသေးတယ်။ အမှန်ဆိုရင် ၃ ဆ တက်ရမှာ.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော. hit counter တွေက ငယ်နိုင် ဘလော. ၃ ခု လုံးမှာ ဒါတွေပဲတင်ထားတာလေ.. ဒီဘလော.ကို ၀င်နေတာတွေချည်းပဲလို. ပြောလို.မရဘူး။ ဟိုဘလော.နှစ်ခုကို ၀င်သမျှလည်း ဒီ counter တွေ မှာ တက်တာပဲ။ စွတ်ပြီးကျေနပ်မနေနဲ.အုံး..။
ပိုစ်.ဖတ်ပြီး သိသွားရအောင် ဒီရက်ပိုင်းတင်တဲ့ပိုစ့်တွေက သိပ်ကောင်းပြီး လူတိုင်းအတွက် မှတ်လောက်သားလောက်တွေ ဖြစ်နေတာကိုး... သေချာလည်း စဉ်းစားပါအုံး.. ဘာလို့အမှန်တရားကို လက်မခံနိုင်ရတာလဲ ဘွားတော်ရယ်.. လူထင်ကြီးအောင် ဘုရားသီချင်းတွေ တင်ထားပေမယ်. တရားမရှိသေးပါလား..။ တကယ်ကောင်းတဲ.ပိုစ်. ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို တစ်ခုခုတော. ရေးချင်မှာပဲလေ..။
ပြီးတော. နောက်တစ်ခုက hit တွေ တက်လို. သူများလာတယ် မထင်နဲ.အုံး ကိုယ်တိုင် ၀င်တဲ.အကြိမ်အရေအတွက်က လည်း ဒီရက်ပိုင်း နည်းတာမှမဟုတ်တာ..။ ၀င်လိုက်ဖျက်လိုက်နဲ....။ ကွန်းမန်.တွေနဲ. စီဘောက်စ်က စာတွေ ကြည်.ရုံနဲ. သိနိုင်တာကတော. ဒီဘလော.ကို ဆဲ ချင်တဲ.လူတွေနဲ. အရေမရ အဖက်မရ ပြောချင်တဲ.သူတွေနဲ. မငယ်နိုင်ပဲ အကြိမ်ကြိမ်ဝင်နေတာပါ..။
April 6, 2011 at 11:48 PM Reply
အားပေးလျက်ပါပဲ အစ်မရေ. . .
ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်အတွေးတွေကို ဆက်လက် ဖြန့်ဝေ နိုင်ပါစေ။
April 7, 2011 at 2:34 AM Reply
အပေါ်မှာ တစ်ယောက် ကွန်မန့်ပေးထားတာ ဖတ်ပြီး ပုံပြင်လေးတခု သွားသတိရလို့ ပြုံးမိတယ်
တခါက အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေ အခိုးခံရလို့ ခြံပိုင်ရှင်က သူကြီးကို တိုင်သတဲ့။
အဲဒါကိုကြားတဲ့ သူကြီးသားက သူ့အဖေသူကြီးကို ပြောတယ် အဖေရာ သူခိုး ခိုးသွားတာက ကြက်နှစ်ကောင်ထဲပါ ကာလသားဟင်းချက်ဖို့။ အခုသူပျောက်တာက ဘဲတွေရော၊ နွားတွေရော။ ကျန်တဲ့အကောင်တွေက သူခိုး ခိုးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး သူ့ဟာသူပျောက်တာနေမှာပါတဲ့ ..။
April 7, 2011 at 3:29 AM Reply
Anonymous နဲ့ ကိုဇော်တို့မှတ်ချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးကို တရားဟောနေတဲ့ ပုံက ပို့စ်ထဲမှာလို အညွန်းထည့်ဖို့ နေရာမရှိတာနဲ့ မထည့်ဖြစ်ပေမဲ့ အဲဒီပုံကို ကိုဇော်ဘလော့ဂ်မှာ တွေ့လို့ အစ်မဘလော့ဂ်မှာ အရင်ထည့်ထားတဲ့ပုံနဲ့စာရင် ရှုခင်းလည်း ရှိတယ် နတ်တွေ တရားလာနာနေတဲ့ပုံလည်း ရှိတော့ ကိုဇော်ဘလော့ဂ်က ကူးလာပြီး အစားထိုးထားတဲ့ပုံ ဖြစ်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
- Hanzaw မင်းတို့ ငါ့ဘလော့ဂ်ကို လိုက်တုပြီးနောက်ပိုင်း ငါ့ဘလော့ဂ်ကို လာလာများတယ်ဆိုတာ လက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါက ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီပြီး ဖြစ်လာတာ မဟုတ်တဲ့အတွက်ရော ဒီလို ယုတ်ညံ့တဲ့ အလုပ်အတွက် အားပေးအားမြှောက်ပြုပြီး ကျေးဇူးတော့ မတင်ပါရစေနဲ့။
အဖက်လုပ်ပြီး ပြန်ပြောချင်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး မသိရင် လူတွေက မင်းပြောတာ အဟုတ်ထင်နေမှာစိုးလို့ ပြောပြမယ်။ မင်းတို့တုထားတဲ့ ဘလော့ကို ဘယ်သူလာလို့လဲလို့ ဘလော့ဂ်ဖွင့်ခါစက ငါသွားကြည့်တာ မင်းတို့ရုရှားကတွေချည်းပဲ ပြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ် Link ကမှ တဆင့်လာတာ မရှိဘူး တိုက်ရိုက်လာတာပဲ များတယ်။ ငါက မင်းတို့ တုထားတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေက live traffic ကို Bookmark ထဲမှာ ထည့်ထားပြီး အခု မင်းမှတ်ချက်ကို ဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာ Live traffic သုံးခုကို ယှဉ်ကြည့်တာ မင်းတို့အတုတွေကို ၀င်ထားတာ တရက်ကြာမှတယောကြ် ၀င်တာနဲ့ လေးငါးနာရီကြာမှ တခါဝင်တာပဲ တွေ့ပြီး4days,9days နဲ့ စနေတယ်။ ၀င်တဲ့သူတွေကလည်း Direct တွေချည်းပဲ။ ငါ့ဘလော့ဂ်မှာ Direct ၀င်တာ သိပ်နည်းတယ်။ Link ထားတဲ့ Link တွေကနေပြီးပဲ ၀င်တာ မိနှစ်တွေပဲ ခြားပါတယ်။ နာရီနဲ့ချီပြီး ခြားတာ မရှိဘူး။ Direct တကူးတက၀င်တာလည်း မင်းတို့ ရုရှားကတွေပဲ များပါတယ်။ မင်းတို့က ငါ့ကောင်တာကို ယူထားလို့ ငါ့ဆီဝင်တဲ့သူပဲ မင်းတို့ဆီက ကောင်တာမှာ သွားပေါ်ပါတယ်။ မင်းတို့ Traffic live ကိုဝင်တာ ငါ့ကောင်တာမှာ ပေါ်စရာအကြောင်း မရှိဘူး။
ငါ့ဘလော့ဂ်မှာ အရင်က ၈ လကြာမှ လူ ခြောက်သောင်း ၀င်နေရာကနေ အခုတော့ သုံးပတ်တည်းနဲ့ လူခြောက်သောင်း ၀င်တာ တွေ့လို့ ဒီလောက်လည်း မနာလိုဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ မင်းပြောတဲ့အတိုင်း မင်းတို့ဆီဝင်တဲ့လူတွေပါ ပါတယ်ထင်ရင် မင်းတို့တုထားတာတွေကို ဖျက်လိုက်ပါ။ စိတ်သက်သာရာ ရသွားလိမ့်မယ်။ မှတ်ချက်ကတော့ သူရေးချင်တဲ့သူမှ ရေးမှာပေါ့။ မှတ်ချက်ရေးဖို့ထက် စာလာဖတ်ပြီး ငါပေးတဲ့ Message ကို စာဖတ်သူရသွားဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။ မင်းတို့လိုက်နှောင့်ယှက်နေတာလည်း ဒီအတွက်ပဲ မဟုတ်လား။ အားလုံးထဲမှာ လူအလာများဆုံးပို့စ်ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် စကားပြောတဲ့ပို့စ်ကိုကြည့်ပါ။ မှတ်ချက် ဘယ်နှစ်ခုရှိလို့လဲ။ အဲဒါ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ရဲ့ ဘ၀နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ပြသထားတဲ့ ငါ့ Message ကို တကယ်တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့တပ်မတော်သားတွေမှာ ကောင်းကောင်း သံဝေဂရသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မှတ်ချက်တခုမှ မရေးလည်း အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။
April 7, 2011 at 7:12 PM Reply
ဒီမိုဘက်တော်သား ဘလော့၈ါကြီးကတော့လုပ်ပြီ မဖြေရှင်းနိုင်တာနဲ့ ဒလိတော့တာပဲ ဆဲတာလဲ မဟုတ်၊ ထိခိုက်တာလဲမဟုတ်ပဲ ဘာလို့ ကျွန်တော့ကွန်းမန့်ကို ဖျက်ရတာလဲ
April 7, 2011 at 11:36 PM Reply
မင်းမှတ်ချက်မှာ ဆဲထားတဲ့အသုံးအနှုန်း၊ Sexual conductive words တွေ မပါပေမဲ့ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း စော်ကားထားလို့ ခေါင်းထဲမှာ မထည့်ချင်လို့ ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ ငါ့ဆီမှာ မှတ်ချက်ရေးရင် ဘယ်လိုပုံစံရေးရမယ်ဆိုတာ အပေါ်မှာ အသေချာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ မင်းတို့ဖါသာမင်းတို့ စည်းမရှိကမ်းမရှိ ပြောချင်ရာပြော လာစွပ်စွဲချင်ရာ စွပ်စွဲနေတာကို ငါက တလေးတစားနဲ့ အလုပ်တခုလို အဖက်လုပ်ပြီး ပြန် ဖြေရှင်းပေးနေဖို့ ငါ့မှာအချိန်မရှိပါဘူး။ သူများအိမ်ကို လာရင်သူများစည်းကမ်းကို လိုက်နာရတယ်ဆိုတဲ့ အသိလောက်တော့ စာမတတ်သူတောင် သိကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင် ပေးသူပေးတာကို အပေးခံရသူ လက်မခံရင် ပေးသူဆီ ပြန်ရောက်တယ်လို့ ဘုရားဟောထားတဲ့ အချက်ကို ကောင်းကောင်း လက်ခံနိုင်ရလိမ့်မယ်။ အခုမင်းစော်ကားမော်ကား လာပေးတဲ့ မှတ်ချက်ကို ငါကလက်မခံလို့ ဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ မင်းဆီပြန်ရောက်သွားပြီလို့ သဘောထားပါ။
May 25, 2011 at 11:56 PM Reply
June 17, 2011 at 6:53 PM Reply
June 17, 2011 at 6:55 PM Reply
ကျမနဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကျောင်းသားနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုထဲ ဖြတ်သန်းခဲ့ကတည်းက မမှန်မကန်စွပ်စွဲ ပုတ်ခတ်မှုတွေ ခြိမ်းခြောက် အကြပ်ကိုင်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ ဒီကိစ္စမှာ ရင့်ကျက်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ အိမ်ထောင်ရေးဘ၀မှာ လုံးဝ ထိခိုက်မှု မရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ခြောက်နှစ်အရွယ် ရင်သွေး သမီးငယ်ကိုပါ ထိခိုက်လာတဲ့အတွက် မိခင်တဦးအနေနဲ့ ရုရုပြန်စစ်ဗိုလ်တွေရဲ့ လုပ်ရပ် အပေါ် တုန့်ပြန်ပြောဆိုဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။
June 17, 2011 at 7:00 PM Reply
ရုရှပြန် စစ်ဗိုလ်အုပ်စုလုပ်ရပ်အား အရေးယူရန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တောင်းဆိုခြင်း (၄) says:
June 17, 2011 at 7:08 PM Reply
ရုရှပြန် စစ်ဗိုလ်အုပ်စုလုပ်ရပ်အား အရေးယူရန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တောင်းဆိုခြင်း (၄)
အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ တရားခံ ရုရှားပြန်စစ်ဗိုလ်တွေကို ဖော်ထုတ် အရေးယူမယ်ဆိုရင် ဒီလူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျမမှာရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ မျှဝေပါ့မယ်။
လျှို့ဝှက်လုပ်တဲ့ အပေးအယူမဟုတ်ပါဘူး။ အများသိအောင် ဗြောင်အပေးအယူ လုပ်မှာပါ။
ရုရှပြန် စစ်ဗိုလ်အုပ်စုလုပ်ရပ်အား အရေးယူရန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တောင်းဆိုခြင်း (၅) says:
June 17, 2011 at 7:11 PM Reply
ရုရှပြန် စစ်ဗိုလ်အုပ်စုလုပ်ရပ်အား အရေးယူရန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တောင်းဆိုခြင်း (၅)
ရုရှပြန် စစ်ဗိုလ်အုပ်စုလုပ်ရပ်အား အရေးယူရန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တောင်းဆိုခြင်း (၆) says:
June 17, 2011 at 7:14 PM Reply
ရုရှပြန် စစ်ဗိုလ်အုပ်စုလုပ်ရပ်အား အရေးယူရန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တောင်းဆိုခြင်း (၆)
ရုရှပြန် စစ်ဗိုလ်အုပ်စုလုပ်ရပ်အား အရေးယူရန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တောင်းဆိုခြင်း (၇) says:
June 17, 2011 at 7:17 PM Reply
ရုရှပြန် စစ်ဗိုလ်အုပ်စုလုပ်ရပ်အား အရေးယူရန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တောင်းဆိုခြင်း (၇)
ဆရာကြီး ဇော်ဂျီ ၏ ဗေဒါလမ်း ကဗျာ says:
ဆရာကြီး ဇော်ဂျီ ၏ ဗေဒါလမ်း ကဗျာ
အုန်းလက်ကြွေ ရေပေါလော၊ မျောစုန်လို့လာ
အဆင်းနဲ့အလာ၊ ဗေဒါမ အထွေး
မြုပ်လေပေါ့ ပေါ်မလာ၊ မဗေဒါအလှ
တလံကွာ လှိုင်းအကြွ၊ ပေါ်လိုက်ပြန်ရ။
ဆရာကြီး ဇော်ဂျီ ၏ ဗေဒါလမ်း ကဗျာ ကို စန္ဒရားချစ်ဆွေ သံစဉ်သီကုံး၍ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီး (ဒေါ်)ကြည်ကြည်ဌေး သီဆိုပြီး ရုပ်ရှင်မင်းသမီး အကယ်ဒမီ မေသန်းနု က သော video
"ပန်းပန်လျက်ဘဲ" သို့မဟုတ် "ငယ်နိုင်လမ်း" ကဗျာ says:
June 17, 2011 at 7:27 PM Reply
မငယ်နိုင် အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် ကဗျာ
မငယ်နိုင် ကျောင်းပြန်တက်၊ ဘလော့ရေးလျက် အလုပ်ဆင်း။
"အိုပါး" နဲ့ "hanzaw" လဲပါ၊ ငယ်နိုင်မ ရန်ဘေး။
"တုတ်ကြီး" ခေါ် အဆဲတိရစ္ဆာန်လေး၊ ဘန်းရပြန်သေး။
"mg" ၊ "zaw" ၊ "သူတော်" Comment မှာ၊ ငယ်နိုင်ကို ဝိုင်းသမ
ကိုယ်ခွဲကာ ရိုင်းသဗျ၊ ပိတ်လိုက်ပြန်ရ။
Comment ပိတ်လဲ မသက်သာ
C-Box ဝယ် Moscow နယ်က၊ ခွေးထွက်လို့လာ
ခွေးအုပ်မှာ တရာနှစ်ရာ၊ ငယ်နိုင်က တကိုယ်ထဲ
မငယ်နိုင် အံကိုခဲ၊ ပန်းပန်လျက်ဘဲ။
June 18, 2011 at 2:08 PM Reply
"ကိုစစ်နိုင်ရဲ့ ကျွန်မအတွက် စပ်ထားတဲ့ ကဗျာလေးကို တကယ်ပဲ သဘောကျပါတယ်။
ဘလော့ဂ်မှာ ကဗျာနည်းနေတာ၊ ကဗျာစပ်မတတ်တာနဲ့ အတော်ပဲ။
ဒီကဗျာလေးကို သီးသန့်ပို့စ်တခုအဖြစ် ပြန်တင်မယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ... မငယ်နိုင်။
မငယ်နိုင် မွေးနေ့ အမှတ်တရ အဖြစ် ကျွန်တော် စပ်လိုက်တဲ့ "ကဗျာလေးကို တကယ်ပဲ သဘောကျပါတယ်" ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။
"ဒီကဗျာလေးကို သီးသန့်ပို့စ်တခုအဖြစ် ပြန်တင်မယ်" ဆိုရင် ကျွန်တော် စပ်ပြီးပြီးချင်း တင်လိုက်တဲ့ comment က ကဗျာစာသားကို ကော်ပီ မလုပ်ပဲ အခု comment က ကဗျာစာသားကို ကော်ပီ လုပ်စေလိုပါတယ်။
"mg" ကိုယ်ခွဲ "zaw" ၊ "သူတော်" ဟာ၊ ငယ်နိုင်ကို ဝိုင်းသမ
Comment မှာ ရိုင်းသဗျ၊ ပိတ်လိုက်ပြန်ရ။